Ny entana tsy anareo | Apg29
Ny entana tsy anareo
Mazava tsara fa ny tahotra izay rehetra hita, sy ny tahotra dia iray ny mafy sy ny fahavalo?
Na inona na inona izay matahotra dia mitaona antsika tsy azo atao hoe, fa matetika no ratsy ny fahasalamana, mba ho tsy misy asa, ary dia toy izany no tsy afaka mividy antsika ny sakafo sy fitafiana, ka tsy afaka mandoa ny hofan-trano izay eo an-tampony ny tahotra.
henjana indrindra fahavalo
Nisy mpamboly niala lehibe fikosoham-bary tamin'ny kitapo mavesatra ny indray. Ny soavaly sy ny mpamily tonga nanatitra ny mpamboly izay hanombohana izany. Ny mpamboly nipetraka nihinana Izy mbamin'ny kitapo ny indray faly izy maintsy handeha. Ny mpamily manontany hoe:
"Nahoana no tsy ny kitapo?"
"Ho tsara noho ny möcke roa I, ny kitapo tsy maintsy handeha", hoy ilay mpamboly.
Matetika isika no manao izany rehefa manome ny fanampiany.
Tsy mahatakatra foana fa misy ny tahotra sy ny tahotra izay mahatonga antsika hanao zavatra ratsy.
Afaka mahatsapa fa tahaka ny mahatakatra fa ny hoavy fanoloana afaka mahatsapa, rehefa mibanjina ny mandringa any amin'ny bibilava noana hypnotizes ny niharam-boina eo anoloany tafatoetra. Noho izany dia maika mora eny na hametraka antsika fisaka ary manao izay tsy tokony hatao ka hanome fahoriana ny tenantsika kokoa.
Na inona na inona izay matahotra dia mitaona antsika tsy azo atao hoe, fa matetika no ratsy ny fahasalamana, mba ho tsy misy asa, ary dia toy izany no tsy afaka mividy antsika ny sakafo sy fitafiana, ka tsy afaka mandoa ny hofan-trano izay eo an-tampony ny tahotra. Ka tsy handoavam-bola. Afaka handroaka ny tahotra maro izy ny vola fa mba ho fiarovana ho mora foana fiakaran'ny mitsoka any amin'ny kely Humidité ny fisiana.
Ny fahatahorana ny tsy ho tiana, satria tsy ampy ny tsara, ho irery dia lehibe noho ny hatramin'izay. Ray aman-dreny raiki-tahotra ny ankizy hoavy. Ankizy miaina ao anatin'ny tahotra ny handeha any an-tsekoly. To face tsy fifankahazoana sy mampijaly. Indrindra i Jesosy, satria mahafantatra ny momba izany rehetra izany, hoy izy fa tsy tokony hanahy momba ny sakafo, fitafiana, na ny fiainantsika.
Tsy misy olona mahay manompo tompo roa amin'ny fotoana iray. (Lioka 6:24) dia tsy maintsy koa mifidiana ny lafiny? Eny, manazava i Jesosy. Raha miezaka ny hanompo ny roa tamin'izany andro izany, dia ho rikoriko ilay "mpampiasa" sy ho tia ny hafa. Noho izany tsy misy eo anelanelany. Inona no miaraka amin'ny tahotra sy ny tahotra hatao? Eto i Jesosy dia manome fanazavana mazava ny kristaly.
"Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamôna hianareo. (= Ny vola sy ny fananana), dia aza manahy ny amin'ny ainareo, izay hohaninareo, na zava-pisotro, na ny amin'ny tenanareo, dia izay mitafy anao. "
Izao no tsaroany ny vorona misy mivaky loha. Andriamanitra miahy antsika, ary rehefa mamela azy ho Andriamanitsika ka dia hahazo porofo fa izy no Raintsika. "Ny Ray fa tokony ho anareo izany rehetra izany, katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany (eto tonga ny teny fikasana), ary ianareo ho namany rehetra. Ataovy ny manokana "kitapo" ao amin'ny "entana" dia handeha amin'izay ny fampanantenan'Andriamanitra mba hikarakara anao sy hahatonga ny tahotra.
Ny tsara indrindra fitsaboana ny tahotra
I Paoly noho ny tahotra fanafodiny tsara indrindra dia manome antsika rehefa milaza ny fomba na efa nisy noana ary niaina tsara, efa nokapohina, nanana fanahiana, indraindray atsangana ho amin'ny rahona, fa halanao ny tia sy ny fiainana eo ambany fandrahonana ho faty. Izy rehetra faniriana antsika ho faly foana sady misaotra an'Andriamanitra amin'izay rehetra eo amin'ny fiainana ny toe-javatra.
Misaotra an'Andriamanitra izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy matahotra Mampatahotra nandositra ka vonjeo izahay amin'ny fisafidianana ny tsara tompon'ny fiainantsika, rehefa matahotra milentika "ny tongony eto am-baravarana" ary intruder miezaka ny mitsabatsabaka.